2022 ခုနှစ်တွင် ခွေးများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့်အခါ အမြဲသတိရရန် အကြံပြုချက်များ
ကြိုဆိုပါတယ်! သင့်အကောင့်သို့ Log
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 18, 2022
အတွက် Sign / Join
ပင်မစာမျက်နှာခွေးခွေးလေ့ကျင့်ရေး2022 ခုနှစ်တွင် ခွေးများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့်အခါ အမြဲသတိရရန် အကြံပြုချက်များ
ဇန်နဝါရီလ 21, 2022
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ခွေးတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်များ
ခွေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါ အမြဲသတိထားပါ။
1 ။ တသမတ်တည်းဖြစ်
2. ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး တရားမျှတပါစေ။
3. ချီးမွမ်းပါ၊ အပြစ်မပေးပါနဲ့။
ငါ့ခွေးလေးကို ပထမဆုံးသင်ပေးတာက ဘာလဲ။
ထိပ်တန်း ခွေးလေ့ကျင့်ရေး ညွှန်ကြားချက်များ က ဘာလဲ။
ထိပ်တန်း အထောက်အကူဖြစ်စေသော ခွေးလေ့ကျင့်ရေး အကြံပြုချက် ၈ ခု။
Shock dog လေ့ကျင့်ရေးကော်လာက ဘာတွေလဲ။
လေ့ကျင့်ရေး ရှော့ခ်ကော်လာများသည် ခွေးများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသလား။
ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာများသည် ခွေးများအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
တုန်ခါနေသော ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာများသည် ခွေးများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသလား။
တုန်ခါနေသော ခွေးကော်လာများ အလုပ်လုပ်ပါသလား။
တုန်ခါနေသော ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာများသည် တရားမဝင်ပါလား။
သင့်ခွေးကို လေ့ကျင့်ရန် အဆင့်များစွာရှိသည်။ သို့သော် ပထမအဆင့်မှာ သင့်ခွေးအား အပ်နှံရန် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် အချိန်ရှိရန် အမြဲသေချာနေရန်ဖြစ်သည်။ ခွေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် နှုတ်အပြစ်ဒဏ်ကို လေ့ကျင့်မှုပုံစံအနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုသင့်ဘူးဆိုတာကိုလည်း အမြဲသတိရသင့်ပါတယ်။
သည်းခံပါ; တသမတ်တည်းဖြစ်ပါစေ။ ကြင်နာပါ
ခွေးလေ့ကျင့်ရေးမှော်ကမ္ဘာသို့ ဦးစွာမဆင်းမီ၊ ဤသည်မှာ ခွေးလေ့ကျင့်သူတိုင်း အစကတည်းက မှတ်သားထားရမည့် အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။
ဤအကြံပြုချက်များကို သင့်ခွေးလေ့ကျင့်ရေး၏ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ခွေးထံသို့ မှားယွင်းသော မက်ဆေ့ချ်များ မပို့မိစေရန် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ခွေးအပြုအမူ အကြိမ်ရေကို ဆွေးနွေးသောအခါတွင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုသာရှိသည်။ အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ဘယ်တော့မှ အပြင်မှာ ရွှံ့ထဲမှာဆော့နေတဲ့ ခွေးက မင်းအပေါ်ကို မခုန်စေချင်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာ အနားယူနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို ခုန်မချသင့်ပါဘူး။
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို တသမတ်တည်းထားရှိခြင်းသည် သင့်ခွေးလုပ်နိုင်သောအရာနှင့် မလုပ်နိုင်သည့်အရာအပေါ် ရှုပ်ထွေးမှုကို တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခွေးတစ်ကောင်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် များစွာသော ကိစ္စများတွင် ကလေးတစ်ဦးကို သင်ကြားပေးခြင်းကဲ့သို့ပင်။ အနားယူမှုမရှိသော သင်ယူမှုသည် စိတ်ဖိစီးစေပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။ သင့်ခွေးကို စိတ်ပါဝင်စားမှု မပျက်စေနှင့်၊ ရပ်တန့်ရမည့်အချိန်ရောက်လျှင် အနားယူရန် သေချာပါစေ။
သင့်ခွေးကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စိတ်လျှော့ထားဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အားလပ်ချိန်မှာ ပစ်ထားတဲ့ အရာတွေကို ပြန်ယူတာ၊ လွန်ဆွဲတာမျိုးလိုမျိုး အားလပ်ချိန်မှာ ဂိမ်းတွေဆော့ပါ။
သင့်ခွေးသည် အနည်းငယ် ပင်ပန်းနေပုံရပါက၊ နောက်တစ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ရေးမစမီတွင် အနားယူရန် အခွင့်အရေးပေးကြောင်း သေချာစေလိုပါသည်။ ပျော်စရာကောင်းပြီး သွားလာရန် နေရာအလုံအလောက်ရှိခြင်းက သင့်ခွေးသည် တစ်နေ့တာလေ့ကျင့်မှုတွင် ငြီးငွေ့လာကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရန်: ခွေးလှေးတန်းခွေးများသည်ခွေးများတွင်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သလား။ Top 7: ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး Flea Collars
သင့်ခွေးကို သင်ဘာလုပ်ချင်ကြောင်း အတိအကျသိစေခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်မှုကို မျှတပါစေ။ ပြီးတာနဲ့ သူ့နားလည်မှု ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ အသေးစိတ်ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီကို သေးငယ်တဲ့အဆင့်တွေအဖြစ် ခွဲထုတ်ဖို့ပါပဲ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ခွေးကို “မလှုပ်မရှား” တတ်အောင် သင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် ပထမအကြိမ်ကြိုးစားတဲ့အခါ သင့်ခွေးက အခန်းကိုဖြတ်ပြီး လမ်းလျှောက်လာရင်း မတ်တတ်ရပ်နေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအစား၊ သူ့ရှေ့မှာရပ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး ဒီစမ်းသပ်မှုလေးကို ပြီးတာနဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ အချိန်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးပေးရပါမယ်။
သင့်ခွေးက သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပြီး၊ လှုပ်လှုပ်ရွရွကလေးကစားစရာ ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာတွေလိုမျိုး ပိုခက်ခဲအောင် လေ့ကျင့်မှုမှာ တခြားအရာတွေကို ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
ခွေးပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ခွေးအမှားများကို ပြုပြင်ရန် အလွန်အာရုံစိုက်လေ့ရှိသော်လည်း မှန်ကန်သောအကျင့်ကို ကျင့်သောအခါတွင် ၎င်းတို့အား ချီးကျူးခြင်းတွင် နည်းပါးသည်။ အကယ်၍ သင့်ခွေးသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ငြိမ်သက်စွာ လှဲလျောင်းနေပါက၊ သူသည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သူ့ကို ပြောပြရမည်။
လေ့ကျင့်နေစဉ်တွင်ပင် သင့်ခွေးကို ဆုငွေအနည်းငယ် သို့မဟုတ် သူတာဝန်ကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သောအခါတွင်ပင် မေတ္တာဖြင့် အားပေးမှုပေးပါ။
သူလုပ်ချင်တာကို နားမလည်တဲ့အခါ သူ့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ သင့်ခွေးက သူဘာမှားနေမှန်း မသိဘဲ အပြစ်ပေးခံရပါက၊ ၎င်းသည် သင့်ခွေးနှင့် သင်၊ သူ၏ပိုင်ရှင်ကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် မယုံကြည်မှုများ တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်သည်။
အရသာရှိသော မုန့်များကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်းသည် လေ့ကျင့်ရေး ခွေးများအတွက် ဆုကြေးအများဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မှန်ကန်တဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခုနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းက သင့်ခွေးကို အလားတူအပြုအမူမျိုး ထပ်လုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် သင့်ခွေး၏အပြုအမူကို ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုသမှုများမရှိပါက သင့်ခွေးအား ခေါင်းကို ပုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် "သားကောင်း" ပေးဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သင့်ခွေးအား အားပေးနိုင်ပါသည်။
ဖတ်ရန်: CBD ဆီသည်ငါ့ခွေးကိုစိတ်ပူပန်စေနိုင်သလား။ ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး CBD ဆီ (၂၀၂၁)
ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာများသည် ခွေးလေ့ကျင့်ရေး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်၊ ခွေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွင် ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဤခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဤဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
အရွယ်မရောက်သေးသော ခွေးပေါက်လေးများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု တိုတောင်းတတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် “ကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော နာခံမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို စတင်သင်ယူရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်။စစ်၊”Dပိုင်ဆိုင်","နေပါ"အသက်7ပတ်မှ 8 ပတ်အထိငယ်သည်။
မှန်ကန်သော ခွေးလေ့ကျင့်မှုကို အစဉ်အလာအားဖြင့် အသက်6လအထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။ တကယ်တော့ ဒီအစောပိုင်းအဆင့်ဟာ သင့်ခွေးလေးကို စတင်လေ့ကျင့်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပါပဲ။
အစပိုင်းတွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံပေါ်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ရိုးရာစိုးမိုးမှု၊ အပြုသဘောဆောင်သော အားဖြည့်မှုနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှု သုံးခုအထိ ပြုတ်သွားကြသည်။
ဤအကြံဉာဏ် ၆ ချက်ဖြင့် ခွေးလေ့ကျင့်ရေး လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ
ခွေးကောင်းဖြစ်ဖို့၊ လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ ခွေးကလေးဟာ လမ်းညွှန်ချက် ခုနစ်ချက်ကို လိုက်နာရမယ်။ စစ်, ဆငျးသကျ, နေပါ, လာ, ဖနောင့်, သွားနှင့် အဘယ်သူမျှမ.
ထိပ်တန်း 8 Hအသုံးဝင်သော Dog လေ့ကျင့်ရေး အကြံပြုချက်များ?
2022 ခုနှစ်တွင် ခွေးများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့်အခါ ဤအချက်များကို အမြဲသတိရပါ။
အကြံပြုချက် 1- သင့်ခွေး၏ခွေးအမည်ကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ။
အကြံပြုချက် 2- အိမ်စည်းကမ်းများ ချမှတ်ပါ။
အကြံပြုချက် 3- သီးသန့် Den တစ်ခု ဖန်တီးပါ။
အကြံပြုချက် 4- သင့်ခွေးအား အပန်းဖြေရာတွင် ကူညီပေးပါ။
အကြံပြုချက် 5- အပြုသဘောဆောင်သော အပြုအမူကို ဆုချပါ။
အကြံပြုချက် 6-- မင်းရဲ့ခွေးကို ခေါ်လာတဲ့အခါ သင်ပေးပါ။
အကြံပြုချက် 7- "ခွေးအချိန်" တွင်လေ့ကျင့်ပါ...
အကြံပြုချက် 8- သင့်ခွေးကို ချက်ခြင်းခုန်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အစပိုင်းတွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံပေါ်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ရိုးရာစိုးမိုးမှု၊ သိပ္ပံနည်းကျလွှမ်းမိုးမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော အားဖြည့်မှုဟူ၍ သုံးမျိုးအထိ ပြုတ်သွားကြသည်။
Shock trаining соllаrs များသည် အလင်းနှိုးဆော်မှုကို ပေးပို့ရန် а rаdiо signаl ကို အသုံးပြု၍ remоte соntrоl (trаnsmitter) မှ တဆင့် ပြန်လည်ရရှိသည့် reсeiver рlасed аrоund yооооооооl (trаnsmitter) မှ တဆင့် ပြန်လည်ရယူသည်။ နှိုးဆွမှုသည် dоg ၏စိတ်အာရုံကို ဆွဲငင်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ဖတ်ရန်: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။
Shосk соllаrs များသည် humаne teасhing ထက် ထိရောက်မှု မရှိပေ။ рunishment-bаsed meаsures suсh аs eleсtriс shосk соllаrs သည် သင့် dоg ၏ အမူအကျင့်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၊ ပြန်လည်ခံစားနိုင်သည် ၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်ဖြစ်သည်။ Shосk соllаrs သည် သင့်ခွေးကို ဟန့်တားနိုင်သည်။
တုန်ခါနေသော ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာသည် ကျွန်ုပ်၏ခွေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ဘူး! တုန်ခါနေသော လှိုင်းများသည် သင့်ခွေး၏ နက်နဲရာသို့ ရိုးရှင်းစွာ ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ သူတို့က ခုန်ပြီး Fidо раin ကို သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Shock collars များသည် လူသားဆန်သော သင်ကြားခြင်းထက် ပိုထိရောက်မှုမရှိပါ။ Punch collars ကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ်ကိုအခြေခံသည့် အစီအမံများသည် သင့်ခွေး၏အပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော်လည်း အပြုသဘောဆောင်သော၊ ဆုကြေးငွေအခြေခံလေ့ကျင့်မှုသည် ထိရောက်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ ထိခိုက်မှု ကော်လာတွေက သင့်ခွေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
တုန်ခါနေတဲ့ ကော်လာက ငါ့ခွေးကို ဒုက္ခပေးမှာလား။ မဟုတ်ဘူး! တုန်ခါနေသော ကော်လာများသည် သင့်ခွေးလည်ပင်းဆီသို့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားသော ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ခွေးကို နာကျင်စေမည်မဟုတ်ပါ။
တုန်ခါနေသော ကော်လာများသည် ခွေးများတွင် အလွန်အကျွံဟောင်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ဘေးကင်းပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အဖြေတစ်ခုဟု လူသိများသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်သလား။ Yesမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပါက ဤကော်လာများသည် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
ဤခွေးတုန်ခါမှုကော်လာများကို အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခွေးနှင့် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်ကြား ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။
Dogs Trust မှပံ့ပိုးပေးထားသည့် နားမကြားသောခွေးများကိုလေ့ကျင့်ရာတွင် တုန်ခါနေသောကော်လာများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ခြွင်းချက်အား တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Westminster သာလျှင် UK တွင် ဤစက်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။
ဒီဆောင်းပါးကိုမင်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ... မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကဘာတွေလဲ 2022 ခုနှစ်တွင် ခွေးများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့်အခါ အမြဲသတိရရန် အကြံပြုချက်များ။
ခေတ္တခဏလေးအတွင်းမှာ မင်းရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို သိပါရစေ။ အောက်ပါမှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်အခမဲ့ခံစားပါ။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များအားတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုတို့ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြသည်။ မင်းဒီပိုစ့်ကိုထည့်ချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့နဲ့ကြော်ငြာချင်တယ်ဆိုရင်မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမရ။ မမှန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
View Post: 3,240
ယခင်ဆောင်းပါးထိပ်တန်း ခွေးပြေးစက် လမ်းညွှန်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ (10)
next ကိုဆောင်းပါးခွေးတွေကို အသီးအရွက်တွေ ကျွေးလို့ရလား။ ခွေးတွေကို အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီး ၉ မျိုး
ဝန်ဆောင်မှုခွေးများကို မည်သို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြသနည်း။ သိရန် အကြံပြုချက် ၅ ခု (လိုအပ်ချက် + ကုန်ကျစရိတ်)
ဧပြီလ 28, 2022
Miniature Schnauzer Lifespan – ဒီခွေးတွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်သလဲ။
ဧပြီလ 27, 2022
Rehomed Dog ကို လက်ခံသင့်သလား- မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကူညီရန် လမ်းညွှန်ချက်
ဧပြီလ 21, 2022
ခွေးအတွက် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဧပြီလ 19, 2022
ခွေးများနှင့် ခရီးသွားခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်များ
သင့်ခွေးကို ရေချိုးသင့်သည့် အကြောင်းရင်း ၇ ချက်
ဧပြီလ 12, 2022
Dog Paws - သင်သိရန်အားလုံး
ဧပြီလ 7, 2022
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စကားစစ်ထိုးပွဲ- မင်းခွေးက ဘာကြောင့် ငါးအနံ့ရတာလဲ။ သိရန် အကြံပြုချက် ၅
The Corman Shepherd Mix - သင်သိထားရမည့်အချက် ၁၀
အားလပ်ရက်ကိုသွားတဲ့အခါ ဂေဟာတက်ဖို့စဉ်းစားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း7ခု
ဧပြီလ 5, 2022
ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး CBD ထုတ်ကုန်များကို ဘယ်လိုစျေးဝယ်ရမလဲ။
မတ်လ 31, 2022
US အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံစျေးကွက် Animalia အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံဖြင့် အားဖြည့်ထားသည်။
မတ်လ 28, 2022
တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel
သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တစ်ဦးမမှန်ကန်ကြောင်းက e-mail လိပ်စာသို့ ဝင်. ပွီ!
ကောလိပ်ကျောင်းများတွင် ခွေးရှိခြင်း၏ စိတ်ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
မေလ 16, 2022
USA 2022 ရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုကောလိပ်များသို့ လျှောက်ထားနည်း
MT- အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အီးမေးလ်ပုံစံ ဖန်တီးမှုလမ်းညွှန်
မေလ 15, 2022
ခွေးကျန်းမာရေးပြဿနာ ၅ ခုနှင့် ၎င်းတို့ကို သင်သံသယရှိပါက ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
မေလ 10, 2022
Dachshund ၏ သက်တမ်းသည် အဘယ်နည်း။ သိထားရမည့်အချက် ၇ ချက်
ဧပြီလ 30, 2022
သင့်ခွေးကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်း6ခု (စဉ်းစားရန်အချက်များ။)
နောက်ဆုံးပေါ် ခွေးပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ ခွေးအမည်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံနှင့် ခွေးများအကြောင်း ပုံပြင်များကို ရှာဖွေပါ။ Dogsvets.Com သည် ခွေးချစ်သူများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအတွက် ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ: thedogsvets@gmail.com သို့မဟုတ် info@dogsvets.com
© 2021 - www.dogsvets.com